Chii chinonzi kusiyanisa? Amazon inosanganisa uye kuendesa chikafu kumba. | Ehupfumi Zvemari
Chii chinonzi kusiyanisa? Amazon inosanganisa uye kuendesa chikafu kumba.
Alexander Vinal | | makambani
Kana ini ndichinyora nyowani nyowani nyaya ini handifarire kuti irambe iri nyaya inongodzidzisa, asi ini ndinofarira kutsanangura, zvirinani zvakafara, izvo pfungwa dzehupfumi kana makambani akataurwa kuitira kuti nenzira iyi tizviise mumamiriro ezvinhu uye tinzwisise zviri nani nhau.
Mune ino kesi, iyo pfungwa inouya mukutamba ndeye iyo kusiyanisa bhizinesi:
1 Chii chinonzi kusiyanisa?
2 Ndeipi chaiyo kesi yeAmazon?
Chii chinonzi kusiyanisa?
Zvakanaka, makambani ese anotsvaga uye kuongorora kuti ungawana sei kukwikwidzana, Mukwikwidzano mukana hunhu hunofanira kuve nekambani inofanirwa kukudziridza kusimbisa chinzvimbo chine mutsigo nekuremekedza vakwikwidzi vayo uye nenzira iyi, kuwedzera mabhenefiti ayo.
Kune izvi, kambani inofanirwa kutsvaga mazano api ichaenderera mberi mumakwikwi, anoshanda uye emakambani nharaunda. Tichataura nezve maviri ekutanga muzvinyorwa zvinotevera.
Corporate zano, saka ndiye uyo anonzwisisa zvisarudzo zvekambani pamusoro pekuti mune mabhizinesi api kukwikwidza uye mune zvikamu zvipi zvaacharega kukwikwidza, ndiko kuti, kukura kwayo kwekuita.
Kana makambani achifanirwa kutora sarudzo nezvedanho remakambani, vanofanirwa kuzviita zvinoenderana ne 3D: iyo yakatwasuka, iyo nzvimbo uye yakatwasuka, zvakaenzana, isu tichataura nezve maviri ekutanga mune ramangwana.
Zvinoenderana ne chinjikira divi, iyo kambani inofanirwa kusarudza mumatanho api ayo ichakwikwidza, ndiko kuti, kana ikaita sarudzo yekusiyana.
Kana tango gadzira pfungwa yedu, tinogona kutaura kuti kusiyanisa bhizinesi kunosanganisira kuwedzera iyo chikwama chebhizinesi yekambani inopa zvigadzirwa zvitsva kana kupinda mumisika mitsva.
Mukati meiyi kusiana, ivo vanozivikanwa mhando mbiri dzakasiyana:
Zvinoenderana zvakasiyana: Kana paine kumwe kubatana kana kubatana pakati penzvimbo dzekare neiyo nyowani. Semuenzaniso, apo kambani apple, yakatsaurirwa kune hunyanzvi hwekugadzira zvinhu, yakafunga kusiyanisa uye kuvhurira nyika yenhare mbozha muna 2007 (zvakare tekinoroji chikamu).
Kusabatana kusingaenderane: Kana pasisina hukama pakati pemabhizinesi pane hukama hwemari, ndiko kuti, mabviro ezve zviwanikwa. Semuenzaniso, kambani yeTATA yakatsaurirwa kune akasiyana zvikamu, sekurima tii kana kugadzira mota. Sekuona kwedu, ivo havana chekuita nemumwe.
Ndeipi chaiyo kesi yeAmazon?
Nyaya yeAmazon inyaya difícil kuronga kubvira kana, kune rumwe rutivi, iri nezvekutengeserana kwepamhepo, chikamu icho chakasarudzika, kune rimwe divi, chigadzirwa chavanopa ndeche zvokudya, chikamu umo kusvika zvino vanga vasipo, mumaonero angu, mumwe anogona kutaura nezve kusiyaniswa haana hukama.
Kusiyanisa kunoitwa neAmazon kuita maviri akasiyana, asi ekuwedzera masevhisi kune vatengi vayo:
Yakachena yeAmazon, sevhisi yekuendesa chikafu, iyo inobvumidza vatengi kuodha kutenga kwavo uye nekuigamuchira mumaawa asingasviki makumi maviri nemana. Sevhisi inogona kunakidzwa muSeattle kubvira 24 asi haina kusvika Europe kusvika munaGunyana wegore rino, kunyanya Germany neAustria.
Amazon Yemunharaunda, rudzi rweJUST EAT, ndiko kuti, online chikuva kune ayo maresitorendi "kusaina kumusoro", mune iyi kesi, ikozvino, kubva Seattle uye izvo zvinovaisa mukutaurirana nevatengi vanoda kuti vatumire chikafu chakatobikwa kumba. . Kuita Amazon semubatanidzi anoisa vatengi kusangana neresitorendi uye zvinoenderana nemutengo pamwe nekutumirwa kweyekupedzisira.
Pamwe munguva pfupi tichaona masevhisi aya achiuya kubva kune hofori yekutengesa ku nyika yedu, kunyangwe panguva iyoyo ndinovimba vanotova nechavo mutero dzimbahwe muSpain, uye saka usaite kurwisana zvisina kukodzera kupokana nemakambani anoita zvinoteerera mutemo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Negocios » makambani » Chii chinonzi kusiyanisa? Amazon inosanganisa uye kuendesa chikafu kumba.
Maitiro ekuchengetedza mari nemakomisheni pamusika wemusika?
E-commerce inotipa hupenyu huri nani?